यस्तो छ विजय शाहीले कागज गराएर दिएको ‘फर्मुला’ - Facebook Khabar
सुर्खेत । दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नं. ८ घर भएकी विवाशा ठकूरी जेनिथ इन्स्टिच्यूट वीरेन्द्रनगरमा लोकसेवा कक्षाको तयारी गरिरहेकी थिइन् । त्यही इन्स्टिच्यूटको एक कोठामा विजय शाहीले कार्यालय खोलेका थिए ।
जताततै विजय शाहीको चर्चा चलिरहेको बेलामा जेनिथमा लोकसेवाको तयारी गर्न आएकाहरूको ध्यान उनीतिर मोडियो । शाहीकै जसरी केही मिनेटमै किताब कण्ठस्त पार्ने कला सिक्ने पाए लोकसेवामा सजिलै नाम निकाल्न सकिने सपना विवाशाले पनि देखिन् । शाहीको टिमका मानिसहरूले उनीहरूलाई लगातार लोभ्याए ।
‘विजय शाहीको टिमका ओम रेग्मी र पुस्कल शर्मा हरेक दिनजस्तो हाम्रो कक्षामा आउँथे । यसरी तयारी गरेर कहीँ पुगिदैन । शाहीसँग फर्मुला सिकेको खण्डमा सजिलै लोकसेवा आयोगामा नाम निकाल्न सकिन्छ भन्दै प्रलोभन दिने गर्थे,’ विवाशा भन्छिन्, ‘हामीलाई पनि फर्मुला सिकेर लोकसेवा आयोगमा नाम निकाल्ने आशा जाग्यो । अनि एक दिन उनीहरूको कार्यालयमा गएर फाराम भर्‍यौं ।’
फाराम भरिसकेपछि उनीहरूलाई कम्तीमा तीन घण्टा पद्यमासनको तयारी गर्न भनिएको थियो । ओम रेग्मीले यूटुयूवमा भएका पद्यमासनसम्बन्धी भिडियो पनि पठाइदिए । त्यही भिडियोको आधारमा आफूहरूले तयारी गरेको विवाशा बताउँछिन् ।
‘खाना खाने समयमा पनि त्यही पद्यमासन गर्न बस्यौं । राति निद्रा पनि लाग्न छोडेको थियो । कसरी तीन घण्टा पद्यमासन गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमै दुई महिना वित्यो,’ उनले सुनाइन् ।
दुई महिनापछि उनलाई छिन्चु बोलाइयो । अरुसँगै तीन घन्टासम्म पद्मासन गर्न लगाइयो । त्यसमा उनी सफल भइन् । त्यसपछि अर्को राउन्डमा केही शब्दहरू घोक्न लगाइयो । अन्तिममा एउटा फर्मुला दिइयो, जुन हेरेर उनी जिल्ल परिन् । फर्मुला सिक्न नसकेपछि उनको सपना अधुरै रह्यो ।
दुल्ले नगरपालिका वडा नं. ५ रिजु पोखराकी लक्ष्मी पोखरेल पनि विजय शाहीको कला सिक्न फाराम भरेको बताउँछिन् ।
‘उहाँहरूले पहिले विज्ञापन गर्नुभएको थियो । हामीले फाराम भर्‍यौं । ओरियन्टेसन कक्षामा विजय शाही आएका हुन् । तीन घण्टा पद्यमासन गर्नुपर्छ, त्यति सक्यो भने पचास प्रतिशत सफलता मिल्ने बताएका थिए,’ उनी भन्छिन्, ‘फाराम भरेको एक-डेढ महिनापछि तीन दिनका लागि गोठीकाँडामा जाने भनेका थिए । एकैदिन नौ घण्टाको कक्षा हुने भनिएको थियो । तर काठमाडौं र झापाबाट पनि केही युवाहरु कक्षामा आउने भएको भनेर भेरीगंगा नगरपालिकाको गुराँस बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाको हलमा राखेर तीन घण्टा पद्यमासन गर्न लगाए ।’
त्यसअघि उनीहरूलाई एकान्तमा गएर फर्मुला सिक्नुपर्ने बताइएको थियो ।
‘एकान्तमा गएर मात्रै फर्मुला सिक्न सकिन्छ भनेर गोठीकाँडा क्यान्सिल गरेर हामीलाई छिन्चु लगे, तर त्यहाँ जङगल वा एकान्त स्थानमा नभई हलभित्र राखे,’ उनले भनिन् ।
त्यसपछि आफूहरुले तीन घण्टा पद्यमासन गरेको उनको भनाइ छ । पद्मासनमा ४० जनाजति पास भएको पोखरेलले बताइन् । फेल भएकाहरुलाई यत्तिकै फर्काइएको थियो ।
‘पद्मासनपछि दोस्रो राउन्डमा १७ वटा शब्द हामीलाई कण्ठ गर्न दिइयो । त्यसका लागि तीन घण्टाको समय तोकिएको थियो,’ उनी भन्छिन् ।
दोस्रो र तेस्रो राउन्डमा पास भएका १३ जनालाई फर्मुला दिइएको थियो, त्यो पनि कागज गराएर । फर्मुला उनीहरुले सोचेभन्दा अनौठो प्रकारको थियो । अंग्रेजी अक्षरको बीचमा अंक, कहिँ जोडघटाउ अनि कहिँ कुनै मात्रा । सबै जिल्ल परे । फर्मुला सिक्न नसकेको भन्दै सबैलाई फर्काइयो